Izigidi zeekiti zovavanyo lwe-COVID-19 zasekhaya zikhunjulwe e-USA
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Izigidi zeekiti zovavanyo lwe-COVID-19 zasekhaya zikhunjulwe e-USA
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ezinye iikiti ezingama-2,212,335 eziveliswe yinkampani yase-Australia esekwe kwibhayoloji i-Ellume kwaye zisasazwe e-US zinokubonisa iziphumo zovavanyo zobuxoki ze-SARS-CoV-2.
I-US Federal Food and Drug Administration ikhupha ukukhunjulwa okungxamisekileyo kweekhithi zovavanyo lwe-COVID-19 ekhaya.
Iikhithi zovavanyo ezikhunjulwe ekhaya zibonisa iziphumo 'eziphezulu kunokwamkeleka' zobuxoki ze-COVID-19.
Uvavanyo olufumanisa iiproteni ze-coronavirus, lugunyaziswe ukuba lusetyenziswe ngokungxamisekileyo yi-FDA kulo nyaka uphelileyo.
'Iklasi endiyikhumbulayo' yezigidi ezidumileyo ngokukhawuleza Izixhobo zovavanyo lwe-COVID-19 ekhaya ikhutshwe yi-US Federal Food and Drug Administration (FDA).
Ngoku ka FDA, 'olona hlobo lunzulu lokukhumbula' lwakhutshwa ngenxa ye-2,212,335 yezixhobo zovavanyo ze-COVID-19 eziveliswe yifemu esekwe eOstreliya. Ellume, kwaye isasazwe e-US, ibonisa iziphumo zovavanyo 'eziphezulu kunokwamkeleka' zobuxoki ze-SARS-CoV-2.
Umlawuli womanyano waseMelika ulumkise ngelithi ukusetyenziswa kwezixhobo ezingalunganga "kunokubangela iziphumo ezibi zempilo okanye ukufa."
Uvavanyo lwe-antigen, olufumanisa iiproteni ze-coronavirus, lugunyaziswe ukuba lusetyenziswe ngokungxamisekileyo yi-FDA kulo nyaka uphelileyo. Ifumaneka ngaphandle komyalelo kagqirha kubo bobabini abantu abadala kunye nabantwana abaneminyaka emibini nangaphezulu, kwaye isebenzisa iisampulu zeswab ezithathwe empumlweni ukubona ukuba ubani une-COVID-19.
Ezinye "iziqashiso ezithile," ezenziwe phakathi kukaFebruwari no-Agasti kulo nyaka, ngoku zikhunjulwa e-US, kunye nenkampani ithi isebenze nabasemagunyeni ukuba basuse ngokuzithandela iimvavanyo ezichaphazelekayo kwimarike.
Inkampani iye yacela uxolo “ngalo naluphi na uxinezeleko okanye ubunzima [abathengi] abanokuthi bahlangabezane nabo ngenxa yeziphumo zobuxoki.
Iziphumo zobuxoki 'eziphezulu kunokwamkeleka', ezibonisa ukuba umntu une-coronavirus xa eneneni akanayo, ziye zaxelwa kwi-FDA kwiimeko ezingama-35 ubuncinci. Akukho ziphumo zingalunganga zifunyenweyo.
Nangona kunjalo, ukuxilongwa okungachanekanga kunokuba nemiphumo esongela ubomi. Umntu usenokufumana unyango olungalunganga okanye olungeyomfuneko, kubandakanywa nonyango lwe-antiviral kunye ne-antibody, kwaye ahlupheke ngakumbi ngenxa yokuzahlula kumalungu osapho kunye nabahlobo.
Isenokukhokelela ekubeni abantu bangawahoyi amanyathelo okhuseleko, kubandakanya nokugonyelwa i-COVID-19, i-FDA ithe.
Isanda kukhutshwa yi-CDC: isoyikiso sezempilo saseMelika January 20, 2022
I-Russia ivala ukuthengiswa, imigodi kunye nokusasazwa kwee-cryptocurrencies January 20, 2022
I-Omicron yenza isithunzi kuhambo loNyaka oMtsha waseTshayina January 20, 2022
I-Airbus ihambisa i-A320neo eneKhabhinethi ye-Airspace entsha kwi-SWISS January 20, 2022